Vaovao - The 22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Sept 16-18 2020
Ny ekipa mpivarotra an'i Zhengchida dia nanatrika ny 22ND Fampirantiana IPM Beijing Hortiflorexpo nandritra ny 16-18 septfaha, 2020. Nijery tsara ny lanonana fanokafana.
Noho ny convid-19 dia ity no 1St ary fampirantiana fotsiny izay natrehintsika tamin'ity taona ity, saingy azo antsoina hoe fahombiazana lehibe izany. Notsidihan'ny mpividy an-trano maro izahay avy amin'ny orinasa mpitrandraka, mpivarotra enta-mavesatra, ary orinasam-barotra. Ny ankamaroan'ny mpividy vahiny dia avy any Azia atsimo atsinanana, toa an'i Korea, Japon ary Thailand. Tao anatin'izay telo andro izay dia feno olona ny trano heva anay ary variana foana ny tovolahy.
Nasehonay ny vokatra farany sy ny katalaoginy vaovao. Mpanjifa marobe no nampiseho fahalianana lehibe tamin'ny vokatra avy amin'ny bozaka fanapahana bozaka, bozaka fanapahana borosy, lelam-baravarankely, lelam-baravarankely ary antsy flail. Nahasarika azy ireo ny vokatra namboarinay, ny maodely isan-karazany, ny MOQ ambany ary ny matihanina, ny sasany amin'izy ireo aza dia nanao fifanarahana taminay tao amin'ny trano heva. Tamin'ny fiafaran'ny fampirantiana dia nahazo karatra orinasa mihoatra ny 100 izahay.
Nihaona tamin'ny mpanjifa taloha mahatoky koa izahay. Niresaka momba ny baiko izahay, nizara ny zava-bita vaovao, niresaka momba ny drafitra vaovao ary nifanakalo hevitra momba ny fironana amin'ny indostria. Misaotra an'ireo mpanjifantsika tsara, fa i Zhengchida dia afaka manana fitomboana mitohy mandritra ny taona maro. Hanohy hanome fanohanana matihanina izahay ary hanatsara ny serivisinay hitazonana ny fifandraisana sy finamanana maharitra.
Manantena ny olona avy amin'ny firenena samy hafa hiray hina hiady amin'ny Convid-19, ary hanjavona tsy ho ela ny aretina. Avy eo isika dia afaka manohy manatrika fampirantiana misimisy kokoa, toa ny Spoga + Gafa, GIE EXPO, ary ny Canton Fair any an-trano sy any ivelany, hampahafantatra ireo lelantsika fanapahana amin'ny olona avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Mino izahay fa miantehitra amin'ny kalitao miavaka, serivisy, traikefa ary haavo amidy, dia ho fantatry ny besinimaro sy ho tian'ny mpanjifa maro kokoa izahay